Abuja - Casa Apt by Pomona. Millenaire Studio - I-Airbnb
Suncity, Abuja, i-Nigeria
U-Nwanyieze Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elibanzi elingamamitha-skwele angama-35, elinenye indawo yesikwele esingu-13.7 imitha endaweni yokuphumula yangaphandle.
Ifakwe okokufakwayo kwesimanje nezinto zikagesi ukuze ijabulise isivakashi sayo ngokunambitheka okumangalisayo.
I-Casa ihlezi emphakathini onobungane osezingeni eliphezulu obizwa nge-Suncity Estate, etholakala kalula nje imizuzu eyi-10 ukusuka eGateway Mall edumile yokuzijabulisa/i-cinema nemisebenzi yokuthenga kanye nemizuzu engama-20 ushayela usuka esikhumulweni sezindiza. Umphakathi unepaki elingumakhelwane, isitolo sokudla, ipeni lokudlala lezingane kanye nesikhungo sokunakekela izingane
I-Casa Apartment inemvelo ethokomele - enomusa, ezolile futhi enethezekile. Isendaweni emaphakathi eSuncity Estate phakathi kwenhliziyo ye-Abuja, iCasa iyigugu elifihliwe.
I-Sitting Room: Indawo yekamelo lokuhlala enethezekile, efakwe yonke into futhi ifakwe iyunithi engu-42" Smart Television & A.C. Indawo ekahle yokufunda noma yokukhuluma futhi inamafasitela uma ujabulela ukukhanya kwemvelo okulula.
Igumbi Lokulala: Kulala 3. Umbhede wenkosi onethezeke kakhulu uhlotshiswe ngezinto zokulala ezihamba phambili emhlabeni. Lawa malineni athokomele enziwe ngo-100% ukotini waseGibhithe wesisekelo eside kanye nelineni elihlanzekile. Uzolala ubusuku bonke lapha e-Casa!
Igumbi Lokugezela: Ifenisha entsha sha, usinki, indlu yangasese kanye neshawa yokuma enamanzi ashisayo ahambayo.
Ikhishi: Izifakelo ezihlome ngokuphelele zobuciko ezinesitofu segesi nohhavini, i-hood extractor, i-microwave, ifriji/ifriji, kanye nesikhipha amanzi ahlanzekile (amanzi okuphuza amahhala ahlanzekile). Izinongo zokupheka ezincane nezinto zetiye zinikezwa Isivakashi mahhala.
I-Apartment yethu isendaweni enhle yomakhelwane evikeleke ngokuphelele futhi inamasango anemigwaqo egandayiwe nezinto ezisebenzayo.
Le ndawo igcwele izindawo zokudlela, izitolo zegrosa, izinxanxathela zezitolo, izindawo zokucima ukoma nezingadi, izindawo zokungcebeleka, inkundla yokudlala njll. Ngokuvamile, ngijabulela ukuhambahamba ngokuthula emphakathini ukuze ngihlale ngiphilile futhi ngilamula.
Siyasihlonipha isikhala sakho nobumfihlo. Nakuba ucingo lwami oluphathwayo kanye ne-imeyili kuhlala kutholakala ukuze kuxoxwe futhi kuxoxwe, ngibuye ngitholakale lapho ngicelwa ukuba ngizisize ngokwami kunoma yisiphi isidingo.
Njengomuntu wasendaweni, ngisesimweni esihle sokusiza Izihambeli zizinze kalula futhi nginikeze izeluleko ezingcono kakhulu mayelana nezinketho zokubona nolwazi.
Siyasihlonipha isikhala sakho nobumfihlo. Nakuba ucingo lwami oluphathwayo kanye ne-imeyili kuhlala kutholakala ukuze kuxoxwe futhi kuxoxwe, ngibuye ngitholakale lapho ngicelwa uku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Suncity namaphethelo